On: Jun 08Author: haIge: A gam akporo, Cell ekwentị Nledo, Cell ekwentị Nledo kupọn, Cell ekwentị Ndepụta, Ọrụ nlekota oru, Wụnye Mobile Nledo, Nwata nu ay!, iPhone 5s Nledo Software, Ekwentị mkpanaaka nlekota oru, Mobile Nledo, Mobile Nledo Online, Nyochaa Internet-eji, Nne na Nna Control, Nledo Facebook ozi, Nledo N'ihi gam akporo, Nledo N'ihi iPhone, Nledo iMessage, inyocha Mobile ama, Nledo na Oku, Nledo na SMS, Nledo Skype, Nledo Viber, Nledo WhatsApp, Track GPS Location Ọ dịghị Comments
Ngwa Iji Sochie Text Ozi nwata nu ay! Free
exactspy-App Iji Sochie Text Ozi iPhone Free nwere ihe dị gị mkpa n'ihi na nnyocha onwe onye na ngwaọrụ. SMS nsochi bụ ihe na ọrụ site na exactspy-App Iji Sochie Text Ozi iPhone Free ma ị nwere ike nweta zuru ọdịnaya nke onye ọ bụla ozi (Ọpụpụ ma ọ bụ na abata) site na nke a software. Ọ instantaneously na-enye gị ma ọ bụ nnata sender ozi ọ bụla ozi, yana ụbọchị na oge.
exactspy-App Iji Sochie Text Ozi iPhone Free abịa na a 5 ụbọchị ego azu na nkwa na ikpe, ị bụghị afọ ojuju, ị nwere ike nweta nkwụghachi. Otú ọ dị, ụdị ọnọdụ a ga-emeghi kere dị ka ị ga-esi zuru fledge data nke ederede ozi gị na ebe mobile. Ọ bụ eziokwu na kacha ngwá ọrụ ịlụ Bibie ihe ọ bụla ụdị nsogbu gị n'obi. Ị nwere ike ị ga-esi zuru ịnweta textbox e nwere ike ịbụ ihe ọ bụla e zoro ezo unu n'ụzọ ọ bụla.
Ị na mkpa nkịtị ohere na ngwaọrụ ịchọrọ gaa ledoo na ikpe iPhone, JailBreak bụ tupu mkpa. Ọ ga-adị mfe arụnyere na unu ga-ahụ dum data gị usoro. Akwụ obere ego na ederede ozi gị ebe mobile bụ nnukwu ihe ma exactspy-App Iji Sochie Text Ozi iPhone Free kacha mma ntụpọ ime ya.
Iji malite nnyocha nnọọ na ị chọrọ ile ndị a mfe nzọụkwụ:
1. Gaa na exactspy'S web-na saịtị ma ịzụta software.
2. Na ibudata ya n'ime ekwentị na ị chọrọ inyocha.
Esi soro ederede ozi na iphone 5
Na exactspy-App Iji Sochie Text Ozi iPhone Free na ị ga-enwe ike:
• Ka Nwere n'Ime Ime Obodo Control nke ekwentị
Ị nwere ike Download :”How To Spy By App To Track Text Messages iPhone Free ?“
Ngwa Iji Sochie Text Ozi nwata nu ay! Free, Ngwa soro ozi ederede na android, Ngwa soro ozi ederede na ekwentị ọzọ, Olee otú soro ozi ederede na iphone 4s, Esi soro ederede ozi na iphone 5